2 Samuel 3 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 3:1-39
Dawid fi kɔɔ so nyaa ahoɔden (1)
Dawid mma mmarima (2-5)
Abner kɔɔ Dawid afã (6-21)
Yoab kum Abner (22-30)
Dawid suu Abner (31-39)
3 Ntɔkwaw a ɛbɛdaa Saul fi ne Dawid fi ntam no kyɛe; Dawid kɔɔ so nyaa ahoɔden,+ na nkakrankakra Saul fi ahoɔden kɔɔ fam.+ 2 Dawid woo mma mmarima wɔ Hebron.+ N’abakan ne Amnon+ a ɔne Yesreelni Ahinoam+ woo no no. 3 Abigail+ a bere bi na ɔware Karmelni Nabal no ba Kileab na ɔto so abien. Nea ɔto so abiɛsa ne Absalom+ a ɔyɛ Gesur hene Talmai+ babea Maaka ba no. 4 Nea ɔto so anan ne Hagit ba Adoniya,+ na nea ɔto so anum ne Abital ba Sefatia. 5 Nea ɔto so asia ne Dawid yere Egla ba Yitream. Eyinom na Dawid woo wɔn wɔ Hebron. 6 Bere a Saul fi ne Dawid fi ntam ntɔkwaw no rekɔ so nyinaa, na Abner+ refa kwan bi so ama ne dibea ayɛ kɛse wɔ Saul fi. 7 Ná Saul wɔ mpena* bi a ne din de Rispa+ a ɔyɛ Aiya babea. Akyiri yi, Is-Boset+ bisaa Abner sɛ: “Adɛn nti na wo ne me papa mpena no dae?”+ 8 Asɛm a Is-Boset kae no nti Abner bo fuwii denneennen, na ɔkae sɛ: “Meyɛ ɔkraman ti a efi Yuda abusua mu anaa? Ɔdɔ a enni huammɔ na mede adɔ wo papa Saul fi, ne nuanom, ne ne nnamfo abesi nnɛ, na memfaa wo nhyɛɛ Dawid nsa, nanso ɛnnɛ worebɔ me sobo wɔ ɔbea ho. 9 Sɛ manyɛ nea Yehowa kaa ntam kyerɛɛ Dawid no+ amma Dawid a, Onyankopɔn ntua Abner ka na ɔmfa bi nka ho. 10 Mɛma nea ɔkae no aba mu. Ɔkae sɛ ɔbɛma ahenni no afi Saul fi, na wama Dawid ahengua atim wɔ Israel ne Yuda so fi Dan akosi Beer-Seba.”+ 11 Na wantumi ammue n’ano anka biribiara ankyerɛ Abner bio, efisɛ na osuro no.+ 12 Ɛhɔ ara na Abner tuu abɔfo kɔɔ Dawid nkyɛn kobisaa no sɛ: “Hena na asaase no yɛ ne dea?” Ɔka kaa ho sɛ: “Wo ne me nyɛ apam, na mɛyɛ nea metumi biara* ama Israel nyinaa aba w’afã.”+ 13 Ɛnna ɔno nso kae sɛ: “Asɛmpa! Me ne wo bɛyɛ apam. Ade baako pɛ na merebisa afi wo hɔ. Ɛne sɛ, mma m’anim, gye sɛ wode Saul babea Mikal+ abrɛ me ansa na woabehu me.” 14 Afei nso, Dawid tuu abɔfo kɔɔ Saul ba Is-Boset+ nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Fa me yere Mikal ma me, me yere a mede adanse bɛkyerɛe sɛ makum Filistifo mmarima 100* ansa na wɔde no rema me aware no.”+ 15 Enti Is-Boset soma ma wɔkɔfaa no fii ne kunu Paltiel+ a ɔyɛ Lais ba no nkyɛn bae. 16 Bere a wɔde no reba no, ne kunu no nso dii n’akyi; osu dii n’akyi ara koduu Bahurim.+ Ɛnna Abner ka kyerɛɛ no sɛ: “San w’akyi kɔ!” Na ɔsan kɔe. 17 Saa bere no, na Abner de nkra akɔma Israel mpanyimfo sɛ: “Dedaadaw nyinaa, na mopɛ sɛ Dawid di mo so hene. 18 Enti afei monkeka mo ho, efisɛ Yehowa ka kyerɛɛ Dawid sɛ: ‘Menam m’akoa Dawid+ so na ebegye me man Israel afi Filistifo ne me man atamfo nyinaa nsam.’” 19 Ɛnna Abner ne Benyaminfo+ nso kasae. Ɛno akyi no, Abner ankasa kɔɔ Dawid nkyɛn wɔ Hebron, na ɔkɔkaa agyina a Israel ne Benyamin fi nyinaa atu no kyerɛɛ no. 20 Bere a Abner ne mmarima 20 baa Dawid nkyɛn wɔ Hebron no, Dawid tow pon maa Abner ne mmarima a wɔka ne ho no. 21 Ɛnna Abner ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Ma menkɔboaboa Israel nyinaa ano mmra me wura ɔhene nkyɛn na wɔne wo nyɛ apam, na woadi nea wopɛ* nyinaa so hene.” Enti Dawid gyaa Abner kwan ma ɔde asomdwoe kɔe. 22 Emu hɔ ara na Dawid nkoa ne Yoab beduu hɔ. Saa bere no, na wɔakɔko de nneɛma pii aba. Ná Abner afi Dawid nkyɛn wɔ Hebron kɔ, efisɛ na Dawid agya no kwan ma ɔde asomdwoe kɔ. 23 Bere a Yoab+ ne asraafo a wɔka ne ho no nyinaa bedui no, nkurɔfo bɛbɔɔ Yoab amanneɛ sɛ: “Ner+ ba Abner+ baa ɔhene nkyɛn, na wagya no kwan ma ɔde asomdwoe kɔ.” 24 Ɛnna Yoab kɔɔ ɔhene nkyɛn kɔkae sɛ: “Dɛn na woayɛ yi? Enti Abner aba wo nkyɛn, ɛnna woagyaa no ama wafa ne ho adi? 25 Wo ara wunim Ner ba Abner! Ɔbae sɛ ɔrebɛdaadaa wo na wahu anammɔn a woretu ne biribiara a woreyɛ.” 26 Ɛnna Yoab fii Dawid nkyɛn, na otuu abɔfo sɛ wontiw Abner nkɔfrɛ no mmra, na wɔne no fii Sira abura no ho san bae, nanso na Dawid nnim ho hwee. 27 Bere a Abner san baa Hebron no,+ Yoab de no kɔɔ kurow pon no ano sɛ ɔrekɔka asɛm bi akyerɛ no wɔ kokoam. Nanso ɔde peaw wɔɔ ne yam wɔ hɔ ma owui.+ Ne nua Asahel a okum no* nti na ɔyɛɛ saa.+ 28 Akyiri yi a Dawid tee no, ɔkae sɛ: “Me ne m’ahenni nni Ner ba Abner mogya ho fɔ+ wɔ Yehowa anim da. 29 Ma ɛnsan mmegu Yoab ne ne papa fi nyinaa ti so.+ Mma ɔbarima a ɔyare,*+ ɔkwatani,+ ɔbarima a ɔto asaawa,* onipa a obewu wɔ sekan ano anaa nea aduan abɔ no+ mmpa Yoab fi da!” 30 Nea enti a Yoab ne ne nua Abisai+ kum Abner+ ne sɛ, okum wɔn nua Asahel wɔ Gibeon ko no mu.+ 31 Na Dawid ka kyerɛɛ Yoab ne nnipa a wɔka ne ho no nyinaa sɛ: “Munsunsuan mo ntaade mu, na mumfura awerɛhow ntama* na munsu Abner.” Ɔhene Dawid nso dii amu no akyi. 32 Wosiee Abner wɔ Hebron, na ɔhene maa ne nne so sui wɔ Abner amusiei hɔ, na ɔman no nyinaa nso sui. 33 Ɛnna ɔhene twaa Abner ho awerɛhow dwom sɛ: “Adɛn nti na ɛsɛ sɛ Abner wu owu a ntease nnim? 34 Wɔankyekyere wo nsa,Na wɔamfa nkɔnsɔnkɔnsɔn* angu wo nan. Wokum wo sɛ obi a nnipabɔnefo* nsa aka no.”+ Ɛnna ɔman no nyinaa suu no bio. 35 Akyiri yi, ɔman no nyinaa brɛɛ Dawid aduan sɛ wɔde rebɛkyekye ne werɛ* saa da no, nanso Dawid kaa ntam sɛ: “Sɛ mididi anaa mede biribi ka m’ano ansa na owia akɔtɔ a, Onyankopɔn ntua me ka na ɔmfa bi nka ho!”+ 36 Ɔman no nyinaa hui, na wɔn ani gyee ho. Eyi ne biribi foforo biara a ɔhene yɛe no, ɔman no nyinaa ani gyee ho. 37 Enti saa da no, Dawid nkurɔfo nyinaa ne Israel nyinaa hui sɛ ɛnyɛ ɔhene na ɔma wokum Ner ba Abner.+ 38 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Munnim sɛ ɛnnɛ okunini ne ɔkatakyi na wawu wɔ Israel yi?+ 39 Ɛnnɛ wɔasra me asi me hene,+ nanso minni tumi a mede bɛyɛ biribi atia Seruia mma yi;+ wɔn ani yɛ den dodo.+ Yehowa ntua ɔbɔnefo ka sɛnea ne bɔne te.”+
^ Nt., “na hwɛ, me nsa bɛka wo ho.”
^ Anaa “mede Filistifo mmarima 100 dua ano were bae.”
^ Anaa “wo kra pɛ.”
^ Nt., “Asahel mogya.”
^ Hebri kasa mu no, ɛkyerɛ ɔbarima a yare ama biribi sen fi ne dua mu ba.
^ Ebetumi aba sɛ ɛfa ɔbarima a ɔyɛ apakye a mmea nnwuma na ɔyɛ ho.
^ Nt., “kɔbere nkɔnsɔnkɔnsɔn.”
^ Nt., “bɔne mma.”
^ Anaa “awerɛhowdi paanoo.”